Mbola hiakatra CODIS indray ny 21 jona izao ilay mpisolovava tsy navela hiasa 2 taona,
Io farany ilay tovovavy tsy hita faty tsy hita velona efa ho herinandro maromaro izao. Tsy misy mandraharaha firy anefa eto an-toerana ary ny fitondrana dia tsy misy fanampiana ara-diplomatika mihitsy mba hanentanana ny manampahefana frantsay hijery akaiky ity fahaverezana tovovavy ity.
VOAOLANA NY VEHIVAVY REHETRA TAO AN-TRANO
Habibiana tsy roa aman-tany no niseho tetsy Ambohijanaka. Izany dia mahakasika ny fanolanana ny vehivavy rehetra izay tao amin’ilay tokantrano. Fanafihana mitam-basy no nitranga ary rehefa azo ny vola sy ny kojakoja hafa izay nilain’ireo jiolahy dia nivadika tamin’ny fanolanana amin’izay. Fito lahy mitazona kalachnikov ny tompon’antoka ary vola mitentina iray tapitrisa mahery no lasa nandritry ny fanafihana. Ambohijanaka koa dia matetika hiverenan’ny jiolahy ary amin’ny dimy ora hariva dia efa maty tanteraka ny tanàna noho ny horohoron’ny mponina eny.
FANAFIHANA TENY AMBOHIDRATRIMO
Jiolahy miisa fito mitondra basim-borona sy sabatra no nandroba tetsy Anosiala Ambohidratrimo. Lasa ny vola mitentina 200.000 ariary ary koa finday miisa dimy. Mba tsy nisy ny aina nafoy na koa ny naratra satria tsy nisy namaly ny tao an-trano raha vao nahita ireo fitaovam-piadiana teny an-tanànan’ireo olon-dratsy. Anisan’ny faritra mena eto an-drenivohitra ankehitriny Ambohidratrimo sy ny manodidina azy. Misy fanafihana mitam-piadiana hatrany isan-kerinandro.
Lasa fanararaotan’ireo tsy misy asa ny fahatapahan’ny lalana etsy 67ha afovoany. Misy ny manisy vato hahafahan’ny fiara avo mihetsika ary koa ny moto sasantsasany. Handoavam-bola anefa izany. Raha tsiahivina, noho ny fahavakisan’ny fantson-drano iray an’ny Jirama no antony nahatonga ny ranobe sy ny lavaka be. Goaka tanteraka ny lalana ary na ireny sprinter avobe ireny aza tafalatsaka teo afovoany ka tsy afa-nikisaka. Ny Jirama anefa eo akaiky eo ihany no misy azy.
MIADY AN-TRANO NY MAPAR
Efa manomboka hita taratra sahady ny ady an-trano eo amin’ny samy Mapar ankehitriny. Na tsy nibaribary aza dia efa tsikaritra ny ady mangatsiaka avy amin’ny fihetsiky ny minisitra an’io antoko io izay nesorina. Nampiandrasany efa adim-pamantaranandro iray mahery ny minisitra vaovao voatendry omaly tetsy amin’ny minisiteran’ny fizahantany etsy Tsimbazaza. Efa harivariva mihitsy vao raikitra ny famindram-pahefana ary dia niandry ela teo ny rehetra vao tonga ny minisitra teo aloha.
MIANKINA AMIN’NY MINISITRY NY FITSARANA
Miankina amin’ny minisitry ny fitsaràna vaovao ny momba an-dry Mbola Rajaonah sy ny olony ary ireo mpitari-tolona teny amin’ny 13 mey. Zara raha nisy dimy minitra dia vita ny fihainoana azy ireo teny amin’ny fampanoavana omaly dia afaka nody indray. Miankina amin’ny famakian’ny minisitra vaovao ny dosie no hitohizan’ny raharaham-pitsaràna na tsia. Miantona aloha izany ny momba ity fanenjehana ity. Mampiahiahy ny olona voakasika anefa satria tsy fantatra izay mety ho tohiny.